Soomaaliya, 23 November 2019
Swan: "Ha la ansaxiyo sharciga doorashada Somalia"
Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay James Swan oo shalay khudbad ka jeediyey Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay inay muhiim tahay in Baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyo sharciga doorashada, dibna u eego sharciga xisbiyada bisha December.
MSF oo walaac caafimaad darro ka muujisay Beledweyne
Masuulyiinta hay'adda dhakhaatriirta aan xuduuda lahayn ee MSF ee Soomaaliya oo ka hadlay xaaladda caafimaad ee magaalada Baladweyne ee gobbolka Hiiraan ayaa walaac ka muujiyay khatar caafimaad oo ay sheegeen inay kusoo wajahan tahay magaaladaasi.
Faaqidaadda: Xiisadda siyaasadeed ee Somaliland
Nin ku lug lahaa dilka Cabdiweli Cali Cilmi oo xukun lagu riday
Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun ku riday nin ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ku lug yeeshay dilka 14 qof oo uu ka mid ahaa Cabdi Weli Cali Cilmi Yare.
Shirka maal-gashiga Somaliland oo ka furmay Nairobi
Magaalada Nairobi waxaa maanta lagu qabtay shir looga hadlayay maalgashiga deegaanada Somaliland, kaasoo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Somaliland.
Maalinta macallinka oo laga xusay Soomaaliya
Bandhigga VOA: Saameynta amniga ee shaqo helista dhallinyarada
Almaas Elman oo xabad ay ku dishay gudaha xerada Xalane
Allaha u naxariistee waxaa maanta gudaha Xerada Xalane ee magaalada Muqdisho xabad ku dhacday ugu geeriyootay Almaas Elman, oo ay walaalo ahaayeen Ilwad Elman, oo ah gabar u ololeysa nabadda, sanadkanna ku jirtay dadkii loo sharaxay Abaal Marinta Caalamiga ee Nabadda ee Noble Peace Price.